Ngaba usakhathazekile ngokungafumani umatshini wokusika ofanelekileyo? Ngomhla ka-Meyi kulo nyaka, inkampani yethu ye-jiahao yenzele umatshini omtsha wokusika ipetroli, onendlela ekhethekileyo yokuyila yanamhlanje, enokuba nefuthe kumbono wakho. JH350 ipetroli idiskhi mgawuli ngokulula usika eziphathekayo, Ilitye, izitena, kunye nokufaka, Nge th ...
Ngo-3: 30 emva kwemini nge-7 ka-Agasti ka-2020, inkampani yethu ibibambe inkomfa yemveliso ekhethekileyo embindini wekomkhulu laseYongkang. Amashishini avela kumzi mveliso wehardware amenyiwe ngokukodwa ukuba azimase le nkomfa. Phantsi kwamalungiselelo ethu ngenyameko, inkampani yethu ibonakalise ukudilizwa kombane kwe-JH-168A 2200W ...
Nge-20 ka-Okthobha, oomatshini be-Yongkang kunye ne-Hardware Expo yabanjelwa e-Yongkang International Convention kunye neZiko leMiboniso. Umboniso ubonise ikakhulu izixhobo zekhompyutha kunye noomatshini. Ngalo mboniso, inkampani yethu ibonise iimveliso zethu kubathengi, nangonxibelelwano kwindawo ekuyo, sisebenza kunye ...